Amanoveli ayi-6 omlando. UDe Roa, uPellicer, uLara, uDurham, u-Aurensanz noMolist | Izincwadi Zamanje
Amaholide, ibhishi, idamu lokubhukuda, ama-sun lounger, ukulala okungapheli, isikhathi samahhala ... Ufuna ukunqanyulwa phakathi kwesidambisi, ibhola, u-ayisikhilimu neziphuzo. Ukuzivocavoca imemori, kokunye ukukhumbula kwamanye amahlobo, kwezinye izikhathi. Nomqondo okhululeke ukuthola izindaba eziningi.
Lawa amanoveli omlando ayi-6 ngababhali abayi-6 abazi izindaba ezifana noJorge Molist, Sebastián Roa noma uCarlos Aurensanz. Kodwa futhi bangoDavid A. Durham, uJavier Pellicer no-Emilio Lara.
1 Ukuhlubuka - UDavid A. Durham
2 Umenzi wewashi ePuerta del Sol - Emilio Lara
3 Ingoma Yegazi Negolide - UJorge Molist
4 Amabhubesi kaHannibal - uJavier Pellicer
5 Inkosi yokugembula - uCarlos Aurensanz
6 Impisi ye-al-Andalus - uSebastián Roa
Ukuhlubuka - UDavid A. Durham
Le yincwadi entsha evela kumbhali othengisa kakhulu Ukuziqhenya kweCarthage. I-twist entsha kumuntu ongafi we Spartacus, i-gladiator edumile, nokuvukela kwezigqila ayekuhola futhi wacishe wanqoba iRoma namabutho ayo angenakunqotshwa. I-American Durham, nayo engumbhali wezinganekwane ezinhle, isitshela ukuthi yikuphi ukuhlubuka okudume kakhulu emlandweni kusuka emibonweni ehlukene nephikisanayo.
Bazoba ngabakhe Spartacus, i-gladiator ukuzimisela kwayo futhi, ngaphezu kwakho konke, ukukhathalela okukhulu kuguqula ikhefu lejele kube ukuhlubuka kwamasiko amaningi okuzobekela umbuso inselelo. Futhi kusuka kulokho kwe- I-Astera, ukuxhumana kwakhe nezwe lemimoya namabika alo okuzohola ekuthuthukeni kokuhlubuka.
Sikubona futhi ngamehlo we I-Nonus, a Isosha laseRoma ohamba ezinhlangothini zombili zodlame ezama ukusindisa impilo. Futhi kulabo ULaelia noHustus, abafana ababili abelusayo ezihamba nezigqila. Futhi sikubona ohlangothini lwamaRoma, nge UCaleb, isigqila enkonzweni kaCrassus, isenenja nomkhuzi wamasosha waseRoma banikwa umsebenzi wokuchoboza ukuvukela izigqila okwakucatshangwa ukuthi kuyinto elula.
Iwashi ePuerta del Sol - U-Emilio Lara
U-Lara, i-jiennese, udokotela we-Anthropology kanye neziqu ze-Humanities, usisa Ngo-1866 eLondon futhi usingenisa emlandweni we indoda yangempela engaziwa kubafundi abaningi. Bekuyi UJose Rodriguez Losada, umenzi wamawashi waseLeonese owakha cishe amawashi amabili adume kakhulu emhlabeni, lawo UPuerta del Sol noBig Ben.
Kule noveli, ngenxa yezizathu zepolitiki iLosada inayo ekudingisweni weSpain okholelwa ngokuphelele kuFerdinand VII futhi manje uhlala eLondon, lapho ezothola khona umyalo ophuthumayo ka lungisa omkhulu ben. Kepha kukhona nomuntu osuka esikhathini sakhe esidlule ambukayo aqede impilo yakhe. Kepha okwamanje, uJosé uhlala kuphela futhi usebenza ukwakha iwashi ngomshini wokuguqula. Umbuzo uzoba ukuthi uzophumelela noma cha.
Ingoma yegazi negolide - UJorge Molist
Enye yama-greats ohlobo lomlando yi-Molist futhi le noveli kube njalo Umklomelo kaFernando Lara kulo nyaka. Kuyo usitshela indaba ye UConanza, oneminyaka eyishumi nantathu kuphela ubudala, kufanele alahle umndeni wakhe, izwe lakhe nakho konke akuthandayo ukushada nomuntu ongamazi omdala kakhulu kunaye. Uyise, inkosi yase-sicily, isengozini enkulu futhi idinga lowo mfelandawonye. Kepha UCharles wase-Anjou, umfowabo weNkosi yaseFrance, uhlasela umbuso awubulale.
UPeter III, Umyeni kaConstanza ubekwa njengeNkosi yase-Aragon futhi uthembisa ukuthi uzophindisela uyise futhi abuyise umbuso oyindlalifa yawo. UPeter, othathwa njengenkosi ebuthakathaka, ubhekene namandla amathathu amakhulu ngekhulu leshumi nantathu: IFrance, upapa noCharles wase-Anjou, baphenduka umbusi waseMedithera.
Amabhubesi kaHannibal - UJavier Pellicer
Lo mbhali waseValencian wethula inoveli yakhe entsha lapho siya khona Inhlonhlo yase-Iberia kusukela ngekhulu lesi-XNUMX BC. C. Umholi wamabutho aseCarthage ngu UHannibal Barca futhi kuzo kubuthana abantu abaningi base-Iberia abaye bamjoyina. UHannibal ufuna ukunqoba iRoma futhi, ngenxa yalokhu, uzowela i-Alps kokukhulu kakhulu okutholwe ngumuntu kuze kube yileso sikhathi. Lapho uzobhekana UPublius Cornelius Scipio namabutho akhe, azowa phambi kwakhe. Okwamanje ...
Ifakwe inkanyezi ngabalingiswa abathathu, ngamunye uhlukile: I-Leukon, umCeltiberian ojoyina impi eshiya othandekayo wakhe ngemuva; I-Alcón, umuntu wase-Saguntine wase-Iberia ohlukunyezwa yicala lokuvukela umbuso; Y Ithebhu, isikhulu saseCarthage esigcina imfihlo engachazeki.
Inkosi yokugembula - UCarlos Aurensanz
Elinye igama elivelele lohlobo nomlobi we-trilogy ye- Banu qasi, lo mbhali waseNavarrese usethulela le noveli entsha.
Sise- umbuso waseNavarre ngo-1188. UTudela uhlala eNkantolo futhi uhlala umzuzwana wokusebenza kahle. Idolobha lonke liyaguqulwa ngemuva kokuxosha amaSulumane. I- isonto elisha lokuhlanganyela Kuyakhiwa futhi kuyadingeka ukuhlala endaweni yesonto lamaSulumane lakudala. Nicolás, isazi samatshe esifundela umsebenzi saseBurgundi, sisebenza ekubhidlizeni kwaso lapho umgwaqo ohamba phansi ubonakala ungena ngaphansi kwezinyawo zakhe.
Lapho ebuya ebusuku uzothola i-crypt efihliwe futhi, kuyo, kubonakala sengathi ukhohliwe, ibhokisi lomngcwabo Muslim nge isikhumba ngaphakathi. Lokho kuzoba ukutholakala okungamaki nje kuphela ukudalelwa kwayo, kepha nokwanoma ngubani owaziyo ngobukhona bayo, lowo wombuso waseNavarre uqobo futhi, mhlawumbe, nowalo lonke eLobukholwa.
Impisi ye-al-Andalus - USebastian Roa
Omunye umbhali omkhulu wezomlando, uRoa I-Aragonese ngokuzalwa kanye neValencian ngokutholwa, futhi inomlando omude wempumelelo.
Kule noveli siyikho maphakathi nekhulu le-XNUMX. Isizwe esikhulu sokugcina sika U-Al Andalus kungumzuzu omuhle kakhulu. Futhi esihlokweni salowo mbuso owesilisa nowesifazane: inkosi yempisi, inzalo yamaSulumane yamaKristu futhi wafinyelela esihlalweni sobukhosi ngokufaneleka kwakhe, waqina ezimpini zasemngceleni futhi wabona ngokwethembeka izinyathelo zakhe namaKristu; futhi okuthandayo, Zobeyda, owesifazane onobuhle odumile futhi ohlakaniphile, ofuna ukugcwalisa isiprofetho esingajwayelekile.
Kepha ngaphesheya kweStrait balola izikhali zabo amabutho e-Almohad, umshini wamasosha obuswa ukushiseka ngokweqile okushiye izintaba zase-Afrika zaya qeda amakristu. Khonamanjalo, amaKrestu aseNhlonhlweni yase-Iberia abonakala ekhathazeke kakhulu ngemibango yawo kunokujoyina ndawonye ukuvikela umhlaba. A) Yebo, yiNkosi uWolf noZobeyda kuphela abame phakathi kwabahlaseli namakhosi asenyakatho.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » I-Novela » Amanoveli ayi-6 omlando. UDe Roa, uPellicer, uLara, uDurham, u-Aurensanz noMolist